အစိုးရသက်တမ်း နှစ်နှစ်ကျော်သည့်တိုင် ကုန်ဈေးနှုန်းအကြောင်း တစ်ခွန်းမျှ မဟခြင်းကို စိတ်မေ? - Yangon Media Group
အစိုးရသက်တမ်း နှစ်နှစ်ကျော်သည့်တိုင် ကုန်ဈေးနှုန်းအကြောင်း တစ်ခွန်းမျှ မဟခြင်းကို စိတ်မေ?
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၁၈
ဒီချုပ် အစိုးရသက်တမ်း နှစ်နှစ်ကျော်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ကုန်ဈေးနှုန်းနှင့်ပတ် သက်၍ တစ်ခွန်းမျှ မပြောခြင်းအ ပေါ် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်း ရွှေဝါရောင်ဦးဆောင် ဆရာတော် တစ်ပါးဖြစ်သည့် ဆရာတော်ဦးဇဝန ကမိန့်သည်။ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် ကျ ရောက်သည့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန် ရေး (၁၁)နှစ်မြောက်အခမ်းအနား တွင် အမှတ်တရ မိန့်ခွန်းပြောကြား ရာ၌ အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်း မိန့်ကြားသည်။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးသည် ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုကြောင့် ပြည် သူလူထု ဒုက္ခရောက်နေသည့်အတွက် စတင်ခဲ့သော တော်လှန်ရေးဖြစ်ပြီး တော်လှန်ရေး(၁၁)နှစ်မြောက် ဖြစ် လာသည့် ယနေ့တွင် ကုန်ဈေးနှုန်း က တက်မြဲဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းအ တွက် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများအနေ ဖြင့် ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း ကုန်ဈေး နှုန်းကျဆင်းရေးအတွက် အစိုးရကို တိုက်တွန်းရန်လိုကြောင်း ဆရာတော် ဦးဇဝနက မိန့်သည်။ ”ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတဲ့ အတွက် တိုင်းပြည်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ဖြစ်အောင် ဘယ်အစိုးရမှမလုပ်နိုင် ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက် ပြီးတော့လည်း ဘယ်အစိုးရမှမလုပ် ခဲ့ဘူး။ အခုလက်ရှိတက်နေတဲ့အစိုးရ ကလည်း နှစ်နှစ်ကျော်ပါပြီ။ ကုန် ဈေးနှုန်းအကြောင်း တစ်ခွန်းတစ်ပါ ဒမျှ မပြောတာ ဦးပဉ္ဇင်း စိတ်မ ကောင်းဘူး။ ဝမ်းလည်း ဝမ်းနည်း တယ်”ဟု ဆရာတော်ကမိန့်သည်။
စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် ကျ ရောက်သည့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန် ရေး(၁၁)နှစ်မြောက်အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ဓမ္မပီယကျောင်းတိုက်တွင် ကျင်းပ ခဲ့ပြီး အချက်ခြောက်ချက်ပါသည့် ထုတ်ပြန်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ နှင့် ယနေ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ အောက်တွင် တိုင်းရင်းသားဒေသ များ၌ တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လာခြင်း၊ တစ်တိုင်းတစ်ပြည်လုံး ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးလာ ခြင်း၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုဘဝ များဆင်းရဲကျပ်တည်းလာခြင်း စသည် ဖြင့်အခြေအနေအရပ်ရပ်မှာ တိုးတက် မလာဘဲ တိုး၍တိုး၍သာဆုတ်ယုတ် လာကြောင်း၊ ယင်းအတွက်ကြောင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများအနေဖြင့် အချင်းချင်း သွေးစည်းညီညွတ်ပြီး စစ်မှန်သည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး(မူ)အရ ငြိမ်း ချမ်းရေးကို အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ် ကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုကို မျက်နှာမူ ၍ စစ်မှန်သည့်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ကို ဦးတည်ဖော်ဆောင်ရန် အလေး အနက်ထားတိုက်တွန်းကြောင်း ထုတ် ပြန်ချက်တွင် ပါဝင်သည်။
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းအဖြေရှာသော နည်းမှာ အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖျက်သိမ်း ပြီး တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအား လုံး၏ သဘောဆန္ဒနှင့်ကိုက်ညီသော အခြေခံဥပဒေသစ်ဖြင့် အစားထိုး နိုင်ရန်ပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းပြည် ၏အခြေအနေအရပ်ရပ်သည် လမ်း ဆုံလမ်းခွသို့ရောက်ရှိနေပြီး လမ်းမှန် သို့ ရောက်ရှိရန်နှင့် အခြေအနေကို ပြောင်းလဲနိုင်ရန်မှာ စစ်မှန်သောစေ့ စပ်ညှိနှိုင်းအဖြေရှာသည့်နည်း(သို့ မဟုတ်) လူထုပါဝင်သောနည်းမှတစ် ပါး အခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ ကြောင်းကိုလည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းအတွက်ကြောင့် ၂ဝဝ၈ ခြေ/ဥကိုအမြန်ဖျက်သိမ်းပြီး ပြည်သူ လူထုသဘောဆန္ဒနှင့် ကိုက်ညီသည့် အခြေခံဥပဒေတစ်ရပ် အမြန်ဆုံး အစားထိုးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ကြ ရန်နှင့် နောက်ဆုံးအပြီးသတ်ဆုံးဖြတ် ချက်အဖြစ် ရဟန်း၊ ရှင်၊ လူ၊ ကျောင်း သား ပြည်သူလူထုအပေါင်းမှ ဝင် ရောက် အဆုံးအဖြတ်ပြုနိုင်ရေးအ တွက် ဘက်ပေါင်းစုံမှပြင်ဆင်ထား ကြရန် ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်များ က တိုက်တွန်းကြောင်း ထုတ်ပြန် ချက်တွင် ပါသည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းတွင် ဆောင်းဦးရာသီ နှစ်လယ်ရိုးရာပွဲတော် ကျင်းပ
MIC မှ ခွင့်ပြုထားသည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၁၅၃၅ ခုအနက် လုပ်ငန်း ၃ဝဝ ကျော် ခွင့်ပြ??
ဒီမိုကရေစီ အားကောင်းမောင်းသန် ဖြစ်စေဖို့ အဓိကရည်ရွယ်ပြီး နိုင်ငံသားတိုင်း တန်းတူညီမျှ ဖြစ
မြန်မာ – တရုတ်နယ်စပ် လမ်းကြောင်းမှ ဗန်းမော်၊ မိုးမောက်နှင့် ရွှေကူမြို့နယ်များသို့ တရုတ်ဘက်
ချင်းတွင်းမြစ် အထက်ပိုင်းတွင် ရွှေနှင့် ပယင်းတူးဖော်မှုများကြောင့် သဘာဝတောများ ပြုန်းတီးလာ?
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းပေါ်တွင် ခရီးသည်တင်ယာဉ်ကို ကုန်တင်ယာဉ်က အရှိန်လွန်ဝင်တိုက်၊ ကုန်တင်ယာဉ်ပေါ်ပါသူ နှစ်ဦး သေဆုံး